Ny Masoko Mihitsy no Nahita Izay Lazain’ny Baiboly! | Pepo Devidze
TANTARANY Ortodoksa nafana fo izy sy ny fianakaviany. Nanaiky ny fahamarinana izy, ary efa Betelita izy sy ny vadiny. Mpisava lalana manokana izy ireo izao.
MBOLA mpianatry ny oniversite tany Koutaïssi aho, tamin’izaho nandre voalohany momba ny Vavolombelona. Nisy mpiara-monina nilaza tamiko fa tsy mampiasa sary masina ny Vavolombelona, sady tsy mino hoe Andriamanitra Mahery Indrindra i Jesosy. Anisan’ny tena tiako tamin’ny finoan’ny Ortodoksa anefa ireo.
Hitako hoe efa nisy Vavolombelona tany Tsageri tamin’izaho nody tany, tamin’ny tapatapaky ny 1992. Naheno zavatra tsara be dia be momba azy ireo i Neny. Izaho kosa tsy nahazoazo azy ireo, ka hoy izy tamiko: “’Ndana ianao mihitsy no mamantatra izay ampianarin-dry zareo e!”
Efa mpitsidika an’ilay fianakaviana teo akaikinay i Pavle sy Paata, izay samy mpisava lalana. Rehefa tonga izy mirahalahy, dia betsaka ny olona nankao mba hihaino sy hametraka fanontaniana. Mba nankao koa aho. Isaky ny nametraka fanontaniana aho, dia nanokatra Baiboly ry zareo ary nasainy novakiko ilay izy. Nisy vokany be tamiko izany, satria ny masoko mihitsy no nahita izay lazain’ny Baiboly!
Tsy ela aho dia nianatra Baiboly niaraka tamin’ireo olona nampianarin’ireo ranadahy. Vita batisa ny folo taminay, herintaona teo ho eo taorian’izay. Lasa Vavolombelon’i Jehovah koa i Neny tatỳ aoriana.
Faly aho fa nasain’ireo ranadahy namaky ny andinin-teny nisy ny valin’ny fanontaniako rehetra. Nahatonga ahy ho resy lahatra izany, na dia tena tiako aza ny zavatra ninoako. Asaiko mamaky andinin-teny avy ao amin’ny Baiboly koa izao ny olona, mba hanampiana azy hankasitraka ny fahamarinana. Nahasoa ahy mantsy izany!